Iimpazamo ezi-5 eziPhezulu zokuThintela ukuThengisa ngokuZenzekelayo | Martech Zone
Ukuzenzekelayo kwentengiso yitekhnoloji enamandla amakhulu etshintshe indlela amashishini enza ngayo intengiso yedijithali. Yonyusa ukusebenza ngokuthengisa ngelixa inciphisa iintloko ezinxulumene nokuzenzekelayo ukuthengisa okuphindaphindiweyo kunye neenkqubo zentengiso. Iinkampani zabo bonke ubungakanani zinokuthatha izibonelelo zokuthengisa ezenzekelayo kwaye zongeze ngakumbi ukuhanjiswa kwazo kunye neenzame zokwakha uphawu.
Engaphezulu kwe I-50% yeenkampani sele zisebenzisa ukuthengisa ngokuzenzekelayo, kwaye phantse iipesenti ezingama-70 zabaseleyo baceba ukuyisebenzisa kwiinyanga ezi-6 ukuya kwezi-12 ezizayo. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba zimbalwa kakhulu iinkampani ezisebenzisa intengiso ezenzekelayo eziye zafumana iziphumo ezifunwayo. Uninzi lwazo lwenza iimpazamo eziqhelekileyo eziphazamisa umkhankaso wabo wentengiso. Ukuba ucwangcisa ukusebenzisa ukuThengisa okuzenzekelayo kwinkampani yakho, thintela ezi mpazamo ukwandisa amathuba okuphumelela ngetekhnoloji yakutshanje yentengiso:
Ukuthenga iQonga lokuZenzekelayo lokuThengisa
Ngokungafaniyo namanye amaqonga etekhnoloji yentengiso njengokuthengisa nge-imeyile okanye izixhobo zemidiya yoluntu, ukuthengisa ngokuzenzekelayo kufuna ukuhlanganiswa okusondeleyo kwesoftware neeakhawunti zemidiya yoluntu, iiwebhusayithi, iCRM esele ikho kunye nezinye iitekhnoloji zokulandela umkhondo. Ayizizo zonke izixhobo ezizisebenzelayo ezenziwa zilingane ngokweempawu kunye nokuhambelana. Iifemu ezininzi zithenga isoftware ngokusekwe kwiimpawu zayo kunye nezibonelelo. Ukuba isoftware entsha ayihambelani neesistim zakho ezikhoyo, iphelela ekudaleni ingxaki ekunzima ukuyisombulula.
Yenza uphando olubanzi kunye nokuvavanywa kwedemo ngaphambi kokugqibezela isoftware ezenzekelayo kwifemu yakho. Isoftware engahambelaniyo iya kufezekisa okuncinci, nokuba ziziphi na izibonelelo kunye neempawu zayo.
Umgangatho weDatha yakho yoMthengi
Idatha ingundoqo wokuthengisa ngokuzenzekelayo. Umgangatho ombi wedatha uvelisa iziphumo ezibi ngaphandle kwesicwangciso sentengiso esifanelekileyo kunye nokuphunyezwa ngokufanelekileyo. Phantse iipesenti ezingama-25 zeedilesi ziphelelwa minyaka le. Oko kuthetha ukuba, isiseko sedatha se-imeyile ezingama-10,000 siya kuba nee-id ezichanekileyo ezingama-5625 kwisithuba esifutshane seminyaka emibini. Ii-id ezingasebenziyo ze-imeyile zikwakhokelela kwii-bounces ezithintela igama lomncedisi we-imeyile.
Kuya kufuneka ubeke indlela endaweni yokucoca iziseko zedatha ngamaxesha athile. Ukungabikho kwendlela enjalo, ngekhe ukwazi ukuthethelela imbuyekezo kutyalo-mali oluzenzekelayo.
Umgangatho ophantsi woMxholo
Ukuzenzekelayo kwentengiso akusebenzi ngokuzimeleyo. Kufuneka uvelise umxholo okwinqanaba eliphezulu owonyusa ukubandakanyeka kwabathengi. Kubalulekile ukuba uqaphele ukuba ukuthengisa izinto ezenzekelayo ukuze uphumelele, ukuzibandakanya kwabathengi kunyanzelekile. Ukuba uphumeza ukuthengisa ngokuzenzekelayo ngaphandle kokutyala kwimizamo ebalulekileyo yokuvelisa umxholo osisiseko rhoqo, kunokukhokelela kwintlekele epheleleyo.
Kubalulekile ukuba uqaphele ukubaluleka komxholo kwaye ube nesicwangciso esiliqili sokugcina umxholo osemgangathweni rhoqo.
Ukusetyenziswa ngokukuko kweeMpawu zePlatform
Phakathi kweenkampani ezamkele ukuthengisa okuzenzekelayo, Kuphela li-10% elisebenzise zonke iinkalo zesoftware. Injongo yokugqibela yokusebenzisa oomatshini abazenzekelayo kukususa ungenelelo lomntu kwimisebenzi ephindaphindwayo. Nangona kunjalo, ukuba isoftware ayisetyenziswanga ngokupheleleyo, umsebenzi wezandla wesebe lezentengiso awuyi kunciphisa. Endaweni yokuba inkqubo yentengiso kunye nokwenza ingxelo kuya kuba nzima ngakumbi kwaye kuthambekele kwiimpazamo ezinokuphetshwa.
Xa uthatha isigqibo sokudibanisa ukuthengisa ngokuzenzekelayo, qiniseka ukuba iqela lihamba ngoqeqesho olubanzi ekusebenziseni izixhobo zesoftware. Ukuba umthengisi akaboneleli ngoqeqesho lokuqala, ke amalungu eqela lakho kufuneka achithe ixesha elininzi kwizibonelelo zesoftware kwaye aqonde ukungafani kwemveliso.
Ukuxhomekeka kakhulu kwi-imeyile
Ukuzenzekelayo kwentengiso kuqalile ngoomatshini bokuthengisa nge-imeyile. Nangona kunjalo, kwifom yayo yangoku, isoftware ibandakanye phantse onke amajelo edijithali. Ngaphandle kokufumana ukuzenzekelayo kwentengiso, ukuba usathembele ikakhulu kwii-imeyile ukwenza isikhokelo, lixesha lokuba uphinde ucinge ngesicwangciso sonke sentengiso. Sebenzisa eminye imithombo yeendaba enje ngezentlalo, iinjini zokukhangela kunye neewebhusayithi ukubonelela ngamava angenamthungo kubathengi ekufezekiseni iinjongo zabo. Ukuxhomekeka kakhulu kwi-imeyile kunokubacaphukisa abathengi ukuya kuthi ga kwinqanaba lokuba baqale ukuthiya inkampani yakho.
Ukufumana eyona mali iphambili kutyalo-mali kwintengiso ezenzekelayo, kuya kufuneka udibanise onke amajelo kwaye usebenzise onke amandla esiteshi ukuguqula amathemba kubathengi.
Ukuzenzekelayo kwentengiso kufuna utyalomali lokuqala ngokubhekisele kwixesha nakwimali. Ayisiyonkqakraza yesoftware enokusombulula imiceli mngeni yakho yentengiso. Ke, ngaphambi kokuba wenze isigqibo sokuthenga isixhobo sokuthengisa esizenzekelayo, qiniseka ukuba uthatha ixesha kwishedyuli yangoku ukuyidibanisa ngokupheleleyo kwinkqubo.
Ngaphaya koko, khuthaza amalungu eqela lakho ukuba afunde izinto ezintsha kunye nokwenza izisombululo ngokusisiseko kwiimfuno zakho. Kwiimeko ezithile, unokucela umthengisi ukuba enze inkqubo ethile ngokwezifiso ngokweemfuno zakho ezithile. Injongo yokugqibela kufuneka ibe kukuphelisa ungenelelo lomntu kwimisebenzi yokuthengisa ephindaphindayo kunye nokwenza umjikelo wobomi wokuthenga.
tags: esizisebenzelayokuphephaukuzenzekela ngokuzenzekelayoiimpazamo zokuthengisa ezizenzekelayompazamo
Ngomhla wama-14 ku-Disemba 2016 ngo-9: 47 AM
Inqaku elinomdla kakhulu. Ndonwabile xa usitsho ukuba ukuthengisa izinto ezenzekelayo zezenkampani zabo bonke ubungakanani, kuba kuyintsomi eqhelekileyo ukuba ngabantu abakhulu kuphela abanokuxhamla kwizixhobo ezizisebenzelayo.
Ngomhla wama-15 ku-Disemba 2016 ngo-5: 33 PM
Maria, enkosi ngempendulo yakho.
Ngokuqinisekileyo uyavumelana nawe. Yintsomi eqhelekileyo ethi "busted" !!!
Ngomhla wama-28 ku-Disemba 2016 ngo-5: 31 AM
Enkosi ngeengcebiso. Ndiceba ukuzama ukuthengisa izinto ezizenzekelayo kunyaka omtsha kwaye kuninzi onokukufunda. Ucinga ntoni ngamaqonga, anjengeGetResponse? Ingxaki kwiinkampani ezininzi ezincinci luhlahlo-lwabiwo mali lwesoftware ezenzekelayo. Emva koko kuza ixesha elifunekayo loqeqesho.
Ngomhla wama-31 ku-Disemba 2016 ngo-1: 17 AM
Molo Edna, undikhuthazile ukuba ndibelane ngeengcinga zam kukhetho lwakho lweqonga lokuThengisa. I-GetResponse liqonga eliqinileyo- kodwa kuya kufuneka uqiniseke ukuba uhlalutya indlela oza kuyisebenzisa ngayo kunye nezixhobo onazo ngaphambili. Ndibhalile malunga nezi izinto ekuthengeni iqonga lokuZenzekelayo Apha.
Jan 24, 2017 kwi-7: 21 AM
Iposi enkulu, Douglas! Kuya kufuneka ufundele wonke umntu ocinga ngokuthenga iqonga lokuzenzekelayo. Enkosi ngokwabelana ngamava akho.
Jan 24, 2017 kwi-7: 19 AM
Edna, enkosi ngempendulo yakho. Andizange ndisebenzise i-GetResponse, ke eneneni, andinakucebisa nantoni na. Kukho ingxaki yohlahlo-lwabiwo mali lweenkampani ezincinci, kodwa ndingatsho ngokuqinisekileyo ukuba kwiimeko ezininzi kufanelekile. Umbuzo woqeqesho ukhona kodwa uninzi lwezixhobo okanye izixhobo ezithambileyo zibonelela ngezilingo zasimahla ukuze uqiniseke ukuba inkonzo iyazifanela na iimfuno zeshishini lakho.